किन सही छन् डा.केसी ?
विद्यार्थीका दृष्टिमा डा.केसीको अनशन किन सही छन् डा.केसी ? सुदन अधिकारी
समग्र स्वाथ्य क्षेत्रमा देखिएको अराजकता, अव्यवस्था र माफियातन्त्र अन्त्य र दुर्गमका गरिब जनताको पनि स्वास्थ क्षेत्रमा समान पहुँचका लागि क्रियाशील प्रा.डा.गोविन्द केसी आठौं अनशन गरिरहनुभएको छ । यसअघिका अनशनले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको भए पनि सीमित व्यक्तिको निहित स्वार्थका कारण तिनीहरू संस्थागत हुन पाएनन् । नागरिकको नैर्सगिक अधिकार मानिएको स्वास्थ सेवालाई केही व्यक्तिको कब्जामा राख्न गरिएका कुकर्म आपँैmले देखेका डा.केसीले यो आठौं अनशनलाई तिनका विरुद्ध पनि लक्षित गर्नुभएको छ ।
देशमा लोकतन्त्र आएपछि लोकतान्त्रिक संस्कार विकास हुनुपर्नेमा उल्टै भ्रष्टाचार, अपराध, गैरजिम्मेवारी, दण्डहीनता र माफियातन्त्र पो संस्थागत भयो । दल बने, नेता बने, व्यवस्था फेरियो तर नेतृत्वकर्ताका प्रवृत्ति फेरिएन । यिनले जनताका नेता बन्ने कोसिसै गरेनन् । यिनीहरू कति निकम्मा साबित भए भने त्यसको फाइदा उठाउँदै केही व्यक्तिले राष्ट्रमाथि हैकम जमाइरहे । त्यसैले देशको सरोकार राख्ने जिम्मेवार विवेकशील नागरिकका रूपमा विकृतिविरुद्ध आफ्नै तवरमा शान्तिपूर्ण संघर्ष गरिइरहन डा.केसी बाध्य बने ।
आठौं अनशन सुरु भएको दस दिन हुँदा पनि सरकारी तवरबाट डा.केसीको माग सम्बोधन गर्न कुनै पहल नगर्ने सरकार विभिन्न स्वार्थ समूहलाई उचालेर डा.केसीविरुद्ध प्रयोग गरेर अहिलेसम्मका सबै उपलब्घि रोक्ने दुष्प्रयास गरिरहेको छ । तर, कर्तव्यच्युत राजनीतिक नेतृत्व र संवैधानिक निकायका व्यक्ति डा.केसीको नैतिक बलसामु घुँडा टेक्न पुनः बाध्य हुनेछन् ।
सिंगो नेपाली समाजको चेतनालाई जरैबाट हल्लाइदिने डा.केसीका शृंखलाबद्ध अनशनले चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारका अनगिन्ती ढोका खोलिदिएका छन् । अब हासिल उपलब्धिलाई जनताको हातबाट उम्कन नदिनमात्र बाँकी छ । तैपनि, किन बाध्य पारिरहेछ डा.केसीलाई अनशनबस्न यो सरकार ? अहिलेसम्मका अनशनबाट गरिब जनताले के पाए ? आखिर डा.केसीलाई पटकपटक अनशन बस्न बाध्य पारिरहने को हुन् ? यहिलेसम्मका अनशनका उपलब्धि के के हुन् ?
नेपालको एउटा मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनरत र यसअघिका अनशनका उपलब्धिलाई नियालिरहेको व्यक्तिका रूपमा मैले यिनै उपलब्धि र आठौं अनशनको महत्वका बारेमा प्रकाश पार्ने जमर्को गरेको छु ।
अहिले एमबीबीएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत म कलेजमा भर्ना हुन आउँदा कलेजले लिने पैसामा एकरूपता थिएन । एउटै कक्षामा एउटै विषय पढ्ने बिद्यार्थीबीच कसैलाई ३० लाख र कसैलाइ ५३ लाख लिएको मैले देखेको छु । भम्र नपरोस्, यो रकम विद्यार्थीले ल्याएको अंकका आधारमा तय गरिएको हैन । नातागोताका, पहुँचवालालाई कम पैसामा भर्ना गराई तिनको भरपाइ घरखेत बेचेर पढ्न आएका तराईका विद्यार्थी र पहँुच नपुग्नेबाट असुल गरिएको थियो । पछि हामीले कलेजमा बुझ्दा कतिसम्म थाहा पायौँ भने केही विद्यार्थीलाई कलेजका सञ्चालकको निजी खातामा पनि रकम राख्न बाध्य पारिएको रहेछ । डा.केसीको सातौं अनशनको फलस्वरूप यस वर्षबाट भर्ना भएका विद्यार्थीबाट मेडिकल कलेजहरूले धेरैहदसम्म सरकारले तोकेअनुसारकै रकम लिइरहेका छन् । अब आउने विद्यार्र्थीले हामीजस्तो कलेज प्रशासनको अपारदर्शी विभेद सहनुपर्ने छैन । वर्षौंदेखि नियम बनाएतापनि कार्यन्वयन गर्न नचाहने सरकार डा.केसीकै कारण बाध्य भएर यो नियम लागु गर्न तयार भयो र हजारौं नेपाली अभिभावक, विद्यार्थी मेडिकल माफियाको दलनबाट जोगिए ।
हामीलाई पहिलो वर्षमा एउटै कक्षामा केही महिना एमबीबीएसका १ सय ४० जना अनि बीडीएसका ४० जना र पछि एमबीबीएसका सबैलाई एउटै कक्षामा राखेर पढाउने कलेजहरू डा.केसीको सातौं अनशनपश्चात बाध्य भएर सरकारको निर्देशनअनुरूप बिद्यार्थीलाई दुईवटा फरक फरक कक्षामा विभाजित गरेर पढाइरहेको छ । यसबाट विद्यार्थीले उल्लेख्य प्रगति गरिरहेका छन् ।
डा.केसीको सत्याग्रहबाट विद्यार्थीले महसुस गर्ने अरू पनि थुप्रै उपलब्धि भएका छन् । तर हामी सबैलाई थाहा छ, यी सबै हामीले गरेको आन्दोलनको सानो प्रतिफलमात्र हो । अरू कैयौं उपलब्धिलाई हामीबाट खोस्ने दुष्प्रयास हुँदै छ । डा.केसीको आठौं अनशन यिनै उपलब्धिलाई संथागत गर्न र रोक्न खोज्नेलाई कारबाही गराउनका लागि हो ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्तमाथि महाभियोग
एकातिर ढा. केसीका पटकपटकका अनशनमा चिकित्सा शास्त्र शिक्षालाई मर्यादित र व्यवस्थित गराउने विभिन्न सम्झौता भएका छन् भने अर्कातिर सर्वोच्व अदालतको पटकपटकको आदेशसमेत अटेर गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर भाइभतिजाको लगानीमा रहेको मेडिकल कलेजलाई बिना पूर्वधार सीट बढाउन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की प्रतक्ष्य संलग्न हुन पुगे । अरू मेडिकल कलेजको सिट संख्या घटाउन निर्देशनात्मक आदेश दिने व्यक्ति आफन्तको निहित स्वार्थ पूर्तीका लागि चिकित्सा शास्त्रका जिम्मेवार पधाधिकारीलाई धम्काएर र अनेकौं हतकन्डा अपनाउन थाले । शक्तिकेन्द्रको स्वार्थमा काम गरी सामानान्तर सरकार चलाउन उद्यत देखिएका कार्कीको क्रियाकलाप धैर्यपूर्वक नियालिरहेका डा.केसी कार्कीको व्यवहार नसुध्रने देखिएपछि बाध्य भएर उनीमाथि कारबाहीको मागमा यो अनशन केन्द्रित गर्न बाध्य भएका हुन् ।
अख्तियारजस्तो निकायलाई संविधानको अक्षर भावनाविपरीत निजी स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग गरिइरहेको पुष्टि त डा.केसीविरुद्ध कार्कीले अख्तियारका प्रवक्तामार्फत् जारी गर्न लगाएको अर्मयादित, असभ्य र भ्रामक विज्ञप्तिले नै गरेको छ । कार्कीकोे रबैया र रवाफ हेर्दा उनले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्न खोजेको भान हुन्छ । डा.केसीको महाभियोगको मागले विचलित लोकमान सिंह कार्की र उनका सहयोगीहरू डा.केसी नै कसैबाट परिचालित छन् भनेर बदनाम गराउन लागेका हुन् ।
अन्य मागका सन्दर्भमा
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाइ महाअभियोग लगाउनुपर्ने मागसँगै तरंगित नेपाली समाज डा.केसीले उठाएका अन्य मागका बारेमा बेखबर छ । हुनत, अरू माग यसभन्दा पनि दूरगामी महत्वका छन् । संसद्ले चाहेका खण्डमा कर्तव्यच्युत भएको आरोप लागेका लोकमान सिंह कार्कीलाइ केही समयमैै महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरेर बर्खास्त गर्न सक्छ ।
तर, चिकित्सा शिक्षासमबन्धी ऐनको मस्यौदालाई उचित परिमार्जनसहित संसद्को यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने, माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत काठमाडौंमा निजी क्षेत्रबाट खोल्न प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता गर्ने र वरिष्टताका आधारमा त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन नियुक्त गर्नेलगायत अघिल्यो अनशनकै क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने मागको आआफ्नै विशेषता र महत्व छ । यी सबै जनताका प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएका माग हुन् ।
डा.केसीको समर्थन किन ?
नेपालमा अझै पनि बर्सेनि हजारौं बालबालिका सामान्य उपचारसमेत नपाएर अकाल मृत्युको सिकार बनिरहेका छन् । यीमध्ये अधिकांश कुनाकाप्चामा बस्ने गरिब नेपालीका सन्तान हुन् । लाग्छ, गरिब कोखमा जन्मदैमा तिनले अकाल मृत्युको श्राप लिएर आएका छन् ।
यस्तै दुर्गम भेगका सुत्केरी महिला सुत्ेकरी हुन नसकी पेटभित्र हुर्केको बच्चासँगै संसार छाड्न विवश छन् । अर्कातिर, सुगममा टोलैपिच्छै गुणस्तरहीन अस्पताल खोल्ने होडै चलेको छ ।
आवश्यक पूर्वाधारविना खोलिएका मेडिकल कलेजबाट उत्पादित आवश्यक ज्ञान र दक्षता नभएका हामीजस्ता हजारौं बिद्यार्थीबाट भविष्यमा जनताको स्वास्थमा हुनसक्ने खेलबाड र पर्नसक्ने असरबारे राज्यका सम्बन्धित निकाय बेलैमा सचेत हुनु पर्दैन ?
चेतनशील नागरिकका रूपमा हामी यस्तो बेथिति कति दिन सहन सक्छौँ ? सक्दनौं भने हाम्रो आवाज मुखरित गर्नेे अहिलेको घडीमा डा.केसीबाहेक अरू छैनन् । उनको आवाज हाम्रै आवाज हो र त्यसको सम्बोधन तबमात्र सम्भब छ जब एकै साथ सबैको बुलन्द भएर गुञ्जिनेछ । डा. केसी भन्छन् – म कुनै दलसँग आबद्ध छैन, कसैको पक्ष वा विपक्षमा छैन । म सधैँ जनताका पक्षमा छु र रहिरहनेछु । मेरो शरीरभन्दा तीन करोड नेपालीको जीवन ठूलो हो ।
अन्र्तमनको निर्देशमा अविचलित लागिरहने डा. केसी लाग्छ, यस युगका दधिची हुन् ।
आदर्श र स्वाभिमान हराउँदै गएको नेपाली समाजका लागि उनी अँध्यारो सुरुङमा देखिएका उज्यालाका किरण हुन् । र, हामीजस्ताका ‘रोल मोडेल’ हुन् । हाम्रा लागि हाम्रै ज्यान ठूलो होला । हाम्रा लागि आफू र परिवारको ज्यादा महत्व होला । तर आफूलाई विवेकशील नागरिक भन्न रुचाउने र परिवर्तनको संवाहक बन्न खोज्ने हो भने अहिले डा.केसीका पक्षमा उभिन तयार हुनुपर्छ ।
आखिर उनी हाम्रै निम्ति न जीवन अर्पेर समर्पित भएका हुन् । अहिले संर्घषका बेला बीचमा (ग्रे एरिया) बस्न रुचाउने हो भने पछि हासिल हुने उपलब्धिमा गौरब गर्ने अधिकार त के नैतिकता पनि हुन्न । तर यस्ता ‘भलादमी’ त्यसको घातक परिणामको भागिदार भने अबश्य बन्नु पर्नेछ । अनि हामी सबैलाई परिवर्तनमा योगदान गर्ने एउटा सुन्दर मौका गुमाउनु परेको पीडामात्रै हुनेछ ।
अनशनलाई सधैँ अस्त्र बनाइरहनु कति उचित छ भन्ने प्रश्न उचितै होला तर डा.केसीलाई विभिन्न समूहद्वारा प्रयोग गरिएको आरोप लगाउनेहरू नै कुनै न कुनैरूपमा लोकमान प्रवृत्तिसँग जोडिएका देखिन्छन् ।
चिकित्सा शास्त्रको विद्यार्थीका नाताले म डा.केसीका माग पूरा गराउन सक्दो सहयोग गर्न तयार छु । किनभने मलाई राम्रोसँग थाहा छ, डा.केसी म र मजस्तै करोडौं नेपालीको वर्तमान र भविष्यसँग प्रत्यक्ष्य सरोकार राख्ने विषयमा लडिरहेका छन् ।
यसर्थ, हामी सबैले आआफ्नो स्वार्थ र सुविधाबाट माथि उठेर सरकारलाई दबाब दिई डा.केसीको माग कार्यन्वयन गराएर अनशन तोडाउन पहल गनुपर्छ । यो लडाइँ हामी जनताले जित्यौँ भने ‘लोकमान प्रवृत्ति’ का व्यक्तिहरू जनहितविरुद्ध जाने आँट गर्ने छैनन् ।
सत्यका पक्षमा सबै मिलेर लडे जतिसुकै शक्तिशाली र त्रूmर तत्वलाई पनि परास्त गर्न सक्छौँ । इतिहासका नायकको गुणगान गरेर कहिल्यै नथाक्ने हामीले आफ्नै अगाडि उभिएका नायकको उपेक्षा गरेमा भविष्यले हामीलाई माफ दिनेछैन ।
सरकार ! गोविन्द केसीले सारा नेपालीका पक्षमा उठाएका माग अविलम्ब पूरा गर ! प्रा.डा.गोविन्द केसी सारा नेपालीका लागि आशाका किरण हुन् । उनी कहिल्यै निभ्ने छैनन् । उनी कहिल्यै हार्ने छैनन् ।